ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူကြမလား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူကြမလား ?
၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူကြမလား ?
Posted by weiwei on Jun 28, 2011 in Community & Society | 25 comments
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ နီးလာပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူကြပါတယ်။ ၀ါတွင်းကာလ ၃ လ မိုးရာသီအတွင်း ၀ါကပ်ဝါဆိုကြမည့် သံဃာတော်များအတွက် ရည်ရွယ်ကပ်လှူကြလို့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ထုံးစံမပျက် သင်္ကန်းဝယ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားရောက်ကပ်လှူသူများ၊ ဘုန်းကြီးများ နေအိမ်သို့ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆွမ်းကပ် သင်္ကန်းကပ် ကုသိုလ်ပြုကြသူများ၊ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားပြီး သင်္ကန်းတန်ဖိုးငွေပေးပြီး သင်္ကန်းကပ်လှူသူများ စသဖြင့် အဆင်ပြေသလို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မလည်းပဲ အများနည်းတူ ကုသိုလ်ရအောင် သင်္ကန်းတစ်စုံဝယ်ပြီး ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တစ်ခုသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်္ကန်းလှူတဲ့ကိစ္စမှာ လူတွေတော်တော်များများ မသိကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ များစွာရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်ကတော့ စာသင်သားသံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွတဲ့အိမ်ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တစ်ခုနဲ့နီးနေတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်မညီမဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တစ်ခုဘေးမှာ သင်္ကန်း ပရိက္ခရာနဲ့ နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်တစ်ခု ရှိနေတာကတစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်မသိသမျှ သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မသိသေးတဲ့သူတွေ ဗဟုသုတရဖို့ ရေးသားချင်စိတ်ပေါက်လာပါတယ်။
လူတွေက သင်္ကန်းအကြောင်းသိပ်မသိကြပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ ၀တ်တာမဟုတ်တော့ ဆိုင်မှာပဲ ဈေးနှုန်းမေးပြီး အဆင်ပြေသလိုဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ၀ယ်လိုက်ကြတယ်။ ဗူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ တံဆပ်ကောင်းကောင်းပါတဲ့သင်္ကန်းကို ဘယ်သူမှ ဖြန့်မကြည့်ကြသလို ဖြန့်ကြည့်လည်း ၀ိနည်းနဲ့ ကိုက် မကိုက် သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီသင်္ကန်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားလှူတော့ ဘုန်းကြီးက သိတယ်။ သူတို့ဝတ်လို့ ရမရ နားလည်ကြပါတယ်။ အခုလိုဝါတွင်းမှာ သံဃာ ၅၀ လောက် ရှိတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ သင်္ကန်းအစုံ ၁၀၀ လောက် အလှူရကြပါတယ်။ ၀ါဝင်ခါနီးမှာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာ သံဃာအားလုံးကို မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကံဆိုး ကံကောင်းပဲ။ ကံကောင်းပြီး အသားကောင်းကောင်းနဲ့ အလျှားအနံအပြည့် ၀ိနည်းနဲ့အညီချုပ်တာကို ရတဲ့ သံဃာအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် ဈေးသက်သာတဲ့ အသားမကောင်းတဲ့သင်္ကန်းကိုရတဲ့သံဃာအတွက် စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ၀တ်လို့မရတဲ့အတူတူဆိုပြီး သင်္ကန်းဆိုင်ကိုသွားရောင်းကြတယ်။ ရောင်းဈေး ၈၀၀၀ ကျပ်တန်တဲ့ သင်္ကန်းတစ်စုံကို ၄၀၀၀ ကျပ်ထက် ပိုပေးတဲ့ဆိုင် မရှိပါဘူး။ သံဃာတွေကလဲ မတတ်သာတော့ ရောင်းစားလိုက်ရပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ၀ယ်ကြပါတယ်။ အဲဒီသင်္ကန်းက သံသရာလည်ပါတော့တယ်။ ဆိုင်ကနေ ၀ယ်တဲ့သူကပြန်ဝယ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်ရောက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ သင်္ကန်းဆိုင်ပြန်ရောက်နဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့သံသရာကြားထဲမှာ သင်္ကန်းဆိုင်ကသာ အမြတ်များများထွက်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးဝတ်ချင်တဲ့သံဃာလက်ထဲရောက်လို့ ဖွင့်ဝတ်လိုက်တော့မှ ဆွေးနေတာမျိုးတွေ ကြုံကြရပါတယ်။
အိမ်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကိုမေးကြည့်တော့ မိုးတွင်းဆို အာရုံဆွမ်း နေ့ဆွမ်း ဆွမ်းခံထွက်ချိန်မှာ မိုးမိလေ့ရှိပါတယ်။ သင်္ကန်းကို ၃ စုံထက် ပိုထားလေ့မရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအတွက်သင်္ကန်းအမြန်ခြောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အသားပါးပါးနဲ့ အမြန်ခြောက်တဲ့သင်္ကန်းကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ပါးလွန်းလျှင်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်ရပြန်ပါသေးတယ်။ သိပ်ထူပြီး သိပ်ပူတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကျတော့ မိုးစိုလဲ မခြောက်၊ နေပူလျှင်လည်း အရမ်းအိုက်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတွက် အနံပြည့် ဆိုဒ်ပြည့်မှ လုံအောင်ခြုံလို့ရတာမို့ ဆိုဒ်မပြည့်တဲ့ သင်္ကန်းဖြစ်မှာကိုလဲ စိုးရိမ်ကြရပြန်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပိုက်ဆံသွားလှူပြီး အရှင်ဘုရားတို့ပဲ သင်္ကန်းကိုအဆင်ပြေသလို ၀ယ်လိုက်ပါဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတွေ သဘောကျကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ကန်းတန်ဖိုးကို နဲနဲလေးပဲ အလှူရှင်ဆီက ကောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ စုပြီး ကောင်းတာတစ်စုံဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလှူရှင်စာရင်းမှာ သင်္ကန်းအစုံတွေ အများကြီးဖြစ်နေပေမယ့်လဲ တကယ်တမ်းပြန်ဝယ်တော့ တစ်ပါးကိုတစ်စုံတောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့လဲ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ ကြားသိရပါတယ်။
တချို့ ၀ိနည်းထိုရ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကတော့ ၀ိနည်းတော်နဲ့အညီချုပ်လုပ်သည့်သင်္ကန်းကိုသာ ၀တ်ကြပါတယ်။ ဓါးခွဲသင်္ကန်းလို့ခေါ်တဲ့ လယ်ကွက်တွေလို အစတွေဖြတ်ပြီးမှ ပြန်စပ်ပြီးချုပ်တဲ့ သင်္ကန်းမျိုးကို အသုံးပြုချင်ကြပါတယ်။ လူတွေအကျီအပ်သလိုမျိုး တချို့ဘုန်းကြီးတွေက ပိတ်စကို ဆေးဆိုးပြီး သင်္ကန်းချုပ်သည့်ဆိုင်မှာ အပ်ပြီးချုပ်ဝတ်သည့် ဘုန်းကြီးများကိုလဲ မြင်ဖူးပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပြီဆိုရင် သင်္ကန်းအသားကောင်းကောင်းနဲ့ ၀ိနည်းအညီဖြစ်မဖြစ် သေချာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ တကယ်ရုံမယ့်သင်္ကန်းကို ရွေးဝယ်ပြီး ကပ်လှူပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်ကို ကြော်ငြာဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတွေက ကောင်းပါတယ်လို့ အာမခံထားတဲ့ စမ်းချောင်းက ပန်ထူးသာ သင်္ကန်းတိုက်မှာ တကူးတကသွားဝယ်ပြီး လှူဖြစ်ခဲ့လေးကို အမှတ်တရနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို သင်္ကန်းအကြောင်းသိသလောက်ပြောပြရင် အမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ခင်ဗျာ
သင်္ကန်းကို အရင်ကတော့ ကြုံရာမှာ ၀ယ်ပြီး လှူလိုက်တာပဲ။ ခုတော့ သင်္ကန်း အဟောင်းတွေကို ဆေးဆိုးပြီး ပြန်ရောင်းတတ်တာတွေ၊ ချုပ်တဲ့နေရာမှာ ၀ိနည်းနဲ့ မညီတာတွေ သိရတော့ ကိုယ်လည်း သိတဲ့၊ စိတ်ချရတဲ့ ဆိုင်ကပဲ ၀ယ်လှူတော့တယ်။ လှူတဲ့အခါ ကိုယ့်ဝယ်လှူတဲ့ သင်္ကန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုရသွားတော့ စိတ်တော့ ပိုချမ်းသာသွားသလားပဲ။
ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လေး ပါ ပြောပေးရင် ကောင်းမယ်….
အဲဒီဆိုင်မှာ ခက်ချောချော နဲ့အမ တစ်ယောက် ဆိုင်ထိုင်တယ် လို့ ပြောကြတယ်…
စမ်းချောင်းက လေ ဟုတ်တယ်မလား
သင်္ကန်းကတော့ တတ်နိုင်ရင် တဦးထဲလှူရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မတတ်နိုင်သူများက စုပြီးလှူရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ်လို့သင့်တာကိုပဲ လှူရင်ကောင်းပါတယ်။ ၀တ်ဘို့သင့်တဲ့ သင်္ကန်းဆိုတာ –
အသားချော သင့်တယ် ..
ပေါ့ပါး သင့်တယ် ..
ကျောင်းတွင်းပုံမှန်ရုံရင် စင်ကာပူစီဝိုင်စီဆိုတာမျိုး ၊ မာတင်ဆိုတာမျိုး ၀တ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
စီဝိုင်စီက နိုင်လွန်များပြီး ချောထွက်နေလို့ အပြင်သွားရင် တခြားပိုကောင်းတဲ့အမျိုးအစား ၀တ်သင့်တယ်။
ဘုန်းကြီးတွေ ကြီးကျယ်တယ် ဂျီးများတယ် အကောင်းကြိုက်တယ် လို့လဲမဆိုသင့်ပါ။ ကိုယ်တိုင် လအနည်းငယ် ဘုန်းကြီးဝတ်ဘူးလို့ ကိုယ်ချင်းစာပြီးပြောတာပါ။
သင့်တော်တဲ့ သင်္ကန်းကောင်းကောင်းတစုံဟာ အရပ်သားဝတ်စုံညံ့ညံ့တစုံဘိုး လောက်ပဲရှိတာပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ခါတော်မှီ ကြေငြာဝင်သွားတာကိုး။ ကော်မရှင်ဘယ်လောက်ရလိုက်သလဲဟင်။ ဟော့ပေါ့ကျွေးရမယ် အဒေါ်ကြီးရေ။
ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာက ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပါ … နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ပြီး နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ဒူဝေေ၀ ……….
သင်္ကန်းကို စပြီး ချုပ်ခဲ့တာ ရှင်အာနန္ဒာ ဖြစ်ပါတယ်။
လယ်ကဇင်းရိုးနဲ့ တူတဲ့ ပုံစံကို နမူနာ ယူပြီး သင်္ကန်းပုံစံ အကွက်ဖော် ချုပ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
လယ်ယာမြေကောင်းနဲ့ မှာ ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးရင် သီးနှံ အထွက်ကောင်းပြီး အဆင်ပြေသလိုမျိုး..
လယ်ယာ မြေကောင်းနဲ့ တူတဲ့ သာသနာမှာ ရဟန်းအလုပ် ကို ကြိုးစား အားထုတ်မယ် ဆိုရင် နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ မဝေးဘူး ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သင်္ကန်းပုံစံ အကွက်ဖော် ချုပ်ပြီး ရုံကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါဆို သကန်းကို မိုးရေခံ သင်္ကန်းလို့ လည်း ခေါ်ပါတယ်။
သင်္ကန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေ ကြားဖူးတယ်။ အလျားအနံ မပြည့်တာ တို့ သင်္ကန်း အသား နဲ့ နာမည်နဲ့ မတူတာမျိုးတို့ပေါ့။
တခါ မြောက်ဥက္ကလာ ဘက်ကို သွားတော့ သင်္ကန်းဆိုင်နာမည်တော့ မပြောတော့ဘူး။ ၀ါဆိုချိန်ပဲ.. ကျောင်းကောက်တွေ တံဆိပ်ခွာပြီး ပြန်ကပ်ချုပ်နေတာ.. ရောင်းအားတက်တဲ့ အချိန် အလျင်မမှီလို့ တံဆိပ်တွေတောင် မခွာနိုင်ဘူး တခါတရံ သူတို့ တံဆိပ် ဘူးထဲသာ ထည့်ပေးလိုက်တာ သင်္ကန်းက ကပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်က တလွဲလို့ ဖြစ်နေတာ မြင်ဘူးတယ်။
တခါ ဒီဗွီဘီ မှာ ထိုင်းနယ်စပ်က ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်း ကပ်တဲ့ အကြောင်း ပြောတာ ပါဘူးတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုန်းကြီးက အင်ဒါဗျူး ဖြေတာ ကြားတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားမိတယ်။ မြန်မာပြည်က သင်္ကန်းကို အရင်နှစ်တွေက ၀ယ်ကပ်ကြတာ အဟောင်းတွေ အဆွေးတွေနဲ့ အလျားအနံ မပြည့်တာ ပါလာလို့ စိတ်ညစ်ရတာနဲ့ အခုတော့ ထိုင်းက သင်္ကန်းပဲ ၀ယ်လှူကြတော့တယ်တဲ့.. တကယ်လုပ်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ် ဆိုသလို ဖြစ်နေတော့ အားလုံးထဲမှာ ရောပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းရမ်း ခံရသလို ဖြစ်နေတယ်။
ဘယ်အလုပ်မဆို စေတနာ ထားရင် အကျိုးများပါတယ်။ စေတနာ အကျိုး ရောင်ပြန်ဟပ်လို့ ပြန်ခံစားရမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ သင်္ကန်းဆိုတာ သာသနာ အတွက် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်း ဖြစ်နေတာ အဟောင်းတွေ ပြန်ကောက်ပြီး အစုပ်အပြဲတွေ ရောင်းတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကြားထဲက ချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့ ရဟန်းတွေ မြေဇာပင် ဖြစ်ကြရတယ်။ ပေါများတဲ့ ရဟန်းကတော့ တခု မကောင်း တခုပြောင်းသုံးလို့ ရပေမဲ့ မရှိနွမ်းပါးတဲ့ ရဟန်းကတော့ ဒါပဲ ရှိတာ အစုပ်ကြီး ဆိုရင် တော်တော် စိတ်မကောင်း ပဲ။
နဂိုကတော့ သင်္ကန်းလှူရင်ပေါ့ပေါ့ပဲဝယ်လှူလိုက်တာပဲ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဘုန်ကြီးဆီက ဘယ်သင်္ကန်းက ဘယ်လိုဆိုတာ အသံပြန်ကြားလာရတယ်။
သာဓု သုံးခါ လှိုက်လှဲစွာ ခေါ်ပါတယ် ဒီထက်ပို၍ ဆထက်ထမ်းပိုး လှူနှိုင် ပါစေ ဗျာ။
ဟုတ်တယ် မဝေ အနော် တို့ အိမ်မှာ လဲ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကိုပိုက်ဆံ လှူပြီး ဝယ်ခိုင်းတယ် ကိုယ်တိုင်ဝယ်ရင်အဆင်မပြေတာ တွေခဏခဏဖြစ်လို့
သင်္ကန်းဆိုင်တွေအကြောင်း သိသူများ တတ်နိုင်သလောက် အပြည့်အစုံတင်ပေးနိုင်ရင် အလှူခံ၊ အလှူရှင် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါသည်။ ဆိုင်ကောင်းဆိုရင် လိပ်စာအပြည့်အစုံပေးပြီး ဆိုင်ညံ့ရင်တော့ နာမည်၊ အထောက်အထားနဲ့တကွ တင်သင့်သည်ထင်ပါသည်။ သို့မှသာ စာဖတ်သူများကလည်း မိမိတို့အတွေ့အကြုံနှင့်စပ်ဆက်၍ ထောက်ခံ၊ ကန့်ကွက်မှတ်ချက် ပြုသွားနိုင်ကြပါမည်။
သင်္ကန်းကို အသုံးပြုကြတော်မူကြတာကတော့ ဘုရားသားတော်များအဖြစ်ခံယူထားကြတဲ့ သံဃာတော်တွေပါဘဲ။
အဲတော့ မိမိတို့ရုံတော်မူကြတဲ့ အပေါ်မှာသာယာမူ့မဖြစ်အောင်
ပံ့သကူ ပစ်ထားတဲ့ အ၀တ်စတွေကို အပိုင်းပိုင်းဆုတ်ပြန်ဆက်ချုပ်ပြီးမှ ၀တ်ရမယ်။
နောက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ကန်းအရောင်တမျိုးထဲကိုဘဲဆိုးရမယ်။
ဒီဝတ်ဆင်မူ့အပေါ်မှာသာယာမူ့မဖြစ်အောင် နူ့းညံ့သော ပိတ်စကို မသုံးရဘူးလို့တော့ကြားဘူးပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကျမ်းကိုး ကျမ်းကားနဲ့ပြပါဆိုရင်တော့ ကျနော်မပြောတတ်ပါဘူး။
ဒီအတိုင်းသာမှန်ရင် ၀ိနည်းနဲ့မညီဘဲချုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းများကို လှူမိရင်၊
ဒါမှမဟုတ်အင်မတင်မှ နူးညံ့တဲ့ပိတ်စနဲ့ချုပ်ထားတာကို ၀ယ်ပြီးလှူမိရင်
ကြားဖူးတာတော့ ပိုး ၊ ဖဲ ၊ ကတ္တီပါ ၊ ၀ါဂွမ်းကပ်ထားတဲ့သင်္ကန်း(ဒီခေတ်တော့ သက္ကလပ်လိုဟာမျိုးဖြစ်မယ်) ဒီ၎မျိုးကို နူးညံ့လွန်း ကောင်းလွန်းလို့ တဏှာနဲ့မာနဖြစ်လွယ်စေလို့ ရှေးဆရာတော်ကြီးများက ပယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အနုဝိနည်းတွေမှာလဲ ပါနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မရှာနိုင်လို့ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးလ က စင်္ကာပူရောက်တော့ အဲဒီကမြန်မာဘုန်းကြီးတပါးတလေ သင်္ကန်းအောက်က စပို့ရှပ်အနီခံဝတ်ပြီး မြို့ထဲသွားလာနေတာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ရာသီဥတုကမအေး(ပူနေ)တာမို့ အအေးဒါဏ်ကာကွယ်ဖို့လို့လဲ အကြာင်းပြစရာမရှိပါ။ အဲဒီကပြန်လာတော့ ဒီကဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းကိုရိုးရိုးဝတ်ရင်ကို တော်သေးတာပေါ့လို့ စဉ်းစားမိပြန်ရော။
အခု နောက်ပိုင်း သင်္ကန်းကို ဆိုင်တွေမှာ သွားမ၀ယ်တော့ဘူး ။ ဘုန်းဘုန်းတွေကိုပဲ ပိုက်ဆံ လှုပြီး ပြန်ဝယ်သလို လုပ်ဖြစ်တာများတယ် ။ အဲလို ကျတော့ ဘုန်းဘုန်းတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့ သင်္ကန်း လှုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်က သွားဝယ်ပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေအတွက် အဆင်မပြေ ပြန်ရင်လည်း အလကားဖြစ်သွားမှာ စိုးတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတွေ သွားရောင်းရင်လည်း ဈေးကတ၀က်ဈေးပဲ ပြန်ပေးကြတာ။ ပွဲစားတွေလည်း ရှိသေးတယ် နော် ။ သူတို့က အရင်းအနှီးမလို ဘူး ။ဘုန်းဘုန်းတွေ လာရင် ဈေးနှိမ်ပြီး တော့ဝယ် ၊ ပြီးရင် ပြန်သွင်း လုပ်စားတာ ။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားနားမှာ အများကြီးရယ် အဲလိုလူတွေ။
၀ိနည်း ထိုတဲ့ ဦးဇင်းဆိုရင် ပိုက်ဆံ မကိုင်ပါဘူး
ပိုက်ဆံ ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အပြင် ဘယ်ဟာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ပြောပိုင်ခွင့်တောင် မရှိဘူး။ အဲဒီ အတွက်.. ဘုန်းကြီးတိုင်းကို ပိုက်ဆံ ပေးပြီး လှူလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံလှူတာကျတော့ ကိုယ်က သင်္ကန်းလှူချင်ပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေက တခြားနေရာမှာ သုံးလိုက်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေက အားနာပြီး သင်္ကန်းတစ်စုံအတွက် ၃၀၀၀ ကျပ်ပဲ အလှူခံကြတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လှူလိုက်တာက သင်္ကန်းကောင်းကောင်းတစ်စုံရဲ့ ၁၀ ပုံတစ်ပုံ လောက်ပဲ ရှိနေတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ …
တကယ်လှူချင်စိတ်ပြင်းပြရင်တော့ ၀ိနည်းနဲ့အညီချုပ်တဲ့ သင်္ကန်းဆိုင်မှာ သွားဝယ်ပြီး လှူတာ ပိုကောင်းပါတယ် …
ဆရာကြီးအီကြာကွေးရေးတဲ့ “လာပတ်သော ရွာအမှုများ” ၀တ္ထုထဲမှာ
ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက တခြားသော သံဃာတော်တွေကို သင်္ကန်းကပ်လှူပါတယ်တဲ့
အဲဒါ အလှူခံသံဃာတော်တွေ သင်္ကန်းကို ဖွင့်ဖောက်လိုက်တော့
သင်္ကန်း၂၀၀လုံး အဟောင်းတွေ အပြဲတွေပဲပါလာတယ်တဲ့
ဒါနဲ့ လှူတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးက စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် နောက်ထပ်သင်္ကန်း၂၀၀ထပ်ဝယ်လှူလိုက်ရပါတယ်
လုပ်တဲ့လူတွေတော့ သံဃာကိုလိမ်တာဆိုတော့ အပြစ်တော်တော်ကြီးမှာနော်
ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်လှူရင် အဲလိုအလိမ်မမိအောင် ဂရုစိုက်ကြပါလို့…….
အစ်ကို ကြောင်ကြီးပြောတာကို နောက်နေ.မှ တင်ပေးမယ်။
လောလောဆယ်တော. အလုပ်ထဲမှာမို. ရေးဖို.မခွင်.မသာလို.
လှူတဲ့သူကတော့ တကယ့်စေတနာသဒ္ဒါတရားနဲ.လှူကြတာပဲ… ဘာလှူလှူမြတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မဟုတ်တရုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ သူအကြောင်းနဲ.သူခံကြရမှာပဲ…
ပြီးတော့ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို လှူကြပါလို.တိုက်တွန်းပရစေဗျာ…. နော်
(သာဓု)3 ။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
သင်္ကန်း ဆိုလို့ သာမည တောင်မှာလဲ အဲဒီလို မကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေ ဆွေးနေတာတွေ . အများကြီးပဲ မီးရှို့ လိုက်ရတာ ကမ္ဘာအေးမှာသံဃာတွေကို ပြန်မလှူခင်ပေါ့ ….နောက်တော့ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကို သေသေခြာခြာ စစ်ဆေးပြီး ရောင်းဖို့ ပြောတော့မှ အဆင်ပြေသွားတယ်.. သင်္ကန်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကလဲ ပင်ရင်းကနေပြီး တင်ရောင်းသင့်တယ်လေ ..ဘုန်းကြီးတွေ ပြန်ရောင်းရင်လဲ လက်မခံ သင့် ဘူး… ကျွန်တော် ကတော့ စက်မှု့ (၁) က သင်္ကန်း ကို သဘောကြတယ်…
စက်မှု ၁ က အရင် ခေတ်က နာမည်ရတာပါ။
အခုခေတ်မှာ ကိုယ်ပိုင် နာမည်တွေနဲ့ တခေတ်ဆန်းပြီးတော့ ရောင်းနေကြပါပြီ။
ဘုန်းကြီးတွေ ယပ် ဆိုရင် ရပ်ပါတော့လို့ အော်ကြော လန်နေကြတယ်။
စိတ်ပျက်ဆို.. ပိုင်ရာတွေ ပေါင်းပြီး စက်ရုံက ထွက်တဲ့ သင်္ကန်းတွေကို ဂိုထောင်ဖြတ် အရေ အတွက်နဲ့ ကျောင်းကောက်တွေနဲ့ လဲပြီး ခိုးထုတ်တာတွေ ရှိတယ် ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် မီးရှို့ပြီး ဇတ်သိမ်းပေးတာ ဖြစ်မယ်။
သင်္ကန်းကိုပိုလို့ ပြန်သွင်းရင် တချို့ဆိုင်တွေက ၅၀၀၀ကျပ်ပဲပေးကြတယ်ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်သင်္ကန်းပေါများတဲ့ တချို့ကျောင်းတွေက ၅၀၀၀ ပဲ အလှူခံတာလို့ကြားဖူးတယ်။ (အဟောင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ကြားဖူးတာပြောတာ)
၅၀၀၀ မဟုတ်ဘူး ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ လောက်ပဲ ရတာ.. ၅၀၀၀ ဆိုတော့ ဈေးကောင်းရတယ်လေ။
ပြန်မရောင်းပဲ ဒုလ္လာဘ ၀တ်တဲ့လူကို အလှူခံပြီး သင်္ကန်း ပေးဝတ် ပြီး ၅၀၀၀ အလှူခံလိုက်တော့.. သင်္ကန်း ဆိုင် ပြေးစရာ မလိုတော့ဘူး အားလုံးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ သက်တောင့် သက်သာ ရတယ် ဆိုပြိး လူတွေလည်း ကျေနပ်ကြတယ်။
စက်မှု၁ ကသင်္ကန်း ကသံဃာတွေဝတ်လို့အဆင်မပြေပါဖူး
လှူ တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းဝယ်တာ ကိုယ့်ဝယ်နိုင်စွမ်းပေါ်လည်း